Horudhac: Real Madrid vs Eibar… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Los Blancos ay caawa dib ugu soo laabanayso horyaalka La Liga) – Gool FM
Horudhac: Real Madrid vs Eibar… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Los Blancos ay caawa dib ugu soo laabanayso horyaalka La Liga)
Haaruun June 14, 2020
(Madrid) 14 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa eegeysa inay wadada guulaha horyaalka La Liga dib ugu soo laabato, marka caawa ciyaarista horyaalka Spain ay ciyaaristiisa ay dib u ambaqaadayaan kal ciyaareedkan kulammada ka haray kal ciyaareedkan 2019-20.
Kaddib markii ciyaaraha kubadda cagta loo hakiyey faafaha Coronavirus, kooxda Real Madrid ayaa caawa wajahaysa naadiga Eibar, waxaana ay doonaysaa inay guul ka gaarto si ay tartanka hanashada horyaalka ula gasho Barcelona.
Los Blancos ayaa haatan fadhisa kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka La Liga, waxaana ay shan dhibcood ka dambeeyaan hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Barcelona, kaddib markii kooxda reer Catalonia ay xalay guul ka gaartay Real Mallorca.
Dhinaca kale Kooxda Eibar oo ay caawa soo dhoweynayso Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta 16-aad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, waxaana ay labo dhibcood ka sarreeyaan booska looga laabto horyaalka.
Taariikhda: Axad, 14 Juun 2020
Garoonka: Estadio Alfredo Di Stefano
Garsooraha: Guillermo Cuadra (Spain)
Nacho ayaa dhaawac uu ka soo gaaray tababarka isbuucii hore, taasoo keentay in daafaca reer Spain uu seego kulanka caawa.
Fede Valverde ayaa la rajeynayaa in la siiyo fursad uu ku sii wado xilli ciyaareedkiisa wanaagsan ka hor inta uusan khadka dhexe ka ciyaarin Luka Modric.
Eden Hazard ayaa soo laaban doona waxaana la filayaa inuu caawa kula soo bilowdo Karim Benzema weerarka kooxda martida loo yahay.
Gonzalo Escalante ayaa ganaax ku seegi doona kooxda martida ah, sidaas darteed Sebastian Cristoforo ayaa la rajaynayaa inuu Pape Diop ku weheliyo khadka dhexe.
Fabian Orellana iyo Pedro Leon ayaa la filayaa inay Takashi Inui kala soo muuqdaan bartamaha garoonka.
Charles iyo Sergi Enrich ayaa hoggaaminaya weerarka ay ku soo galayso Eibar ee 4-4-2, inkastoo kooxda martida ah ay ku dari karaan Edu Exposito.
>- Real Madrid ayaa dhalisay wax ka badan 2.5 gool lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajaheen Eibar tartammada oo dhan.
>- Kooxda Real Madrid ayaan laga badinin 13-keedii kulan ee ugu danbeeyay oo ay garoonkooda ku ciyaaraan kulammada horyaalka La Liga.
>- Eibar ayaa ku guuldarreysatay inay badiso lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay marti aheyd kulammada horyaalka La Liga.
Maxay tahay sababtii uu taageeraha ugu soo dhex orday garoonka ciyaartii xalay Barcelona ay garaacay Real Mallorca xilli taageere la'aan la ciyaarayay?
Dhowr xaqiiqo oo laga diiwaan geliyey guushii ay xalay Kooxda Barcelona ka gaartay Real Mallorca